Chii chinonzi Yakabatanidzwa Kushambadzira?
Vhidhiyo: Chii chakabatanidzwa Kushambadzira?
Svondo, Gunyana 23, 2012 China, Gumiguru 11, 2012 Douglas Karr
Isu tinowanzo kupa humbowo kune vatengi vedu kuti kushambadzira kwakawanda-chiteshi ndiyo nzira yakanaka yekuwedzera mhedzisiro munzira dzese, kwete imwe chete. Isu takanyora nezvekuuya kwe Zvemagariro Terevhizheni, asi kushambadzira mamodheru akakomberedza echinyakare terevhizheni ari kuchinja futi, kusanganisira zvishandiso, nharembozha matekinoroji uye magariro enhau. Iyi vhidhiyo huru kubva BBR / Saatchi & Saatchi kutsanangura kushambadzira kwakasanganiswa.
Tags: kushambadzaIntegratedrevatema kushambadza
Vhidhiyo: Iyo Yakareba iPhone Izvozvi